Shina Foibe AsiaI Iraisam-pirenena Lalana Fitateram-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Shina mankany amin'ny Asia Central CentralIIn'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena
Azia Afovoany dia faritra izay mivoaka avy ao amin'ny Ranomasin'ny Caspian any andrefana ka hatrany Sina any atsinanana, ary avy ao Afghanistan sy Iran any atsimo ka any Rosia. Ny faritra dia ahitana ny repoblika sovietika taloha an'i Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ary Uzbekistan. Namorona faritra ara-politika sy kolontsaina iraisana izy ireo, ary manana ny ambaratonga ara-kolontsaina avo lenta.
Ireo soholojika amin'ny kamiao tsotra, kamiao mavesatra, fitaterana mankany amin'ny xingjiang Horgos, Alashankou laoyemiao, hongshanzui, Dulata, Baktu, Jeminay, torugart, kashgar, Irkeshtam, Karasu, Khunjerab tonga tany kazakhstan, kyrgyzstan, uzbekistan, tajikistan, sykistanistan, .
Lalana serivisy serasera ara-pahasalamana sohologiste
Làlana lehibe any Sina Tany nomena
Province City / County Firenena
Xinjiang Horgos Kazakhstana
Fitaovana fitaovana Kazakhstana
Fampidirana vetivety ho an'ny XUAR sy ny vaky farany ao XUAR
Xinjiang, ofisialy Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR), dia faritra otonomie ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, izay hita any amin'ny farany avaratra andrefan'ny firenena.
Noho ny fizarana faritany lehibe indrindra any Chine sy ny fizarana faha-8 lehibe indrindra eto an-tany, Xinjiang dia milanja mihoatra ny 1.6 tapitrisa km2 (640,000 kilaometatra toradroa)
Xinjiang dia mametraka ny tanin'i Mongolia Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan Afghanistan, Pakistan ary India. Ny lalana malaza indrindra amin'ny lalana Silk ara-tantara dia nitety ny faritra avy any atsinanana ka hatrany amin'ny sisin-tany avaratra andrefana.
Izy io dia manana fifanakalozana ara-toekarena sy kolontsaina matetika miaraka amin'ny Azia afovoany, Azia andrefana, Azia Atsimo ary Eropa, ary manana lalana sy seranan-tsambo mahazatra.
Miaraka amin'ny fampiharana ny paikadin'ny fanokafana eo amoron'ny sisintany, ny lalana an-dranomasina silvika tamin'ny taonjato faha-21 sy ny fehikibo fikaonan-doko «One Belt And One Road» dia nanao fivoarana haingana. Amin'ny taona 2019, misy seranana ara-barotra maromaro amin'ireo firenena manodidina no misokatra.
Làlana mankany Xinjiang ny làlana lehibe
Fandehanana lehibe Tany nomena
Area City / County Firenena manondraka
Altay Aheitubik Kazakhstana
Prefektiora otran'i Bortala Mongol Fitaovana fitaovana
Ili KazakAfektoha Horgos
Ili KazakAfektoha Dulata
Ili KazakAfektoha Muzart
Prefektioran'i Kizilsu Kirghiz Turugart Kyrgyzstan
Prefektioran'i Kizilsu Kirghiz Erkeshtam
4. rafitra fanaraha-maso ny fitaterana GPS
5. Alaharo ny fiara misy ny entanao any amin'ireo firenena any Azia Afovoany
6. traikefa mihoatra ny 10 isaky ny fitaterana làlana any amin'ny firenena afovoany
Kilometra Avy any Khorgos Hatramin'ny tanàna lehibe ao Kazakhstan
CITY / STATION CITY / STATION STOD CODE Avy amin'i Khorgos(KM)
Атырау Atyrau 661705 3600
Туркестан Turkestan 697800 1250
Kilomita Avy any Khorgos Hatramin'ny tanàna lehibe any Ozbekistan
Boukhara Boukhara 730106 1870
Kilometra Avy any Khorgos ka hatrany amin'ireo tanàn-dehibe any Turkmenistan
Kilometra Avy any Khorgos Hatramin'ny tanàna lehibe any Tajikistan
Kilometra Avy amin'ny seranan'i Khorgos ka hatrany amin'ireo tanàn-dehibe ao Kyrgyzstan
Inona avy ireo karazan'entana mifanentana amin'ny làlana iraisampirenena mankany Azia Afovoany?
A. Ny halavany na ny halavan'ny entana dia mihoatra ny halehiben'ilay fitoeran-javatra ary mihoatra ny haben'ny lalamby isaky ny metatra toradroa misy cargos mavesatra
B.Railway station izay tsy misy ny serivisy fanofana boaty
C.Cargos dia mitaky fahatsiarovan-tena lehibe raha ny fitaterana lalamby dia tsy afaka manome antoka ny tsingerin'ny fitaterana noho ny fitarihan'ny fiaran-dalamby sy fotoana fitaterana.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny fadin-tseranana, ny famindrana ny fomba amam-panao sy ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Azia Central?
A. Ny fitaterana an-dalambe any Azia afovoany dia ny hanatanteraka ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fomba amam-panao ao an-toerana rehefa avy mitondra entana eny an-tsena any amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
B. Ny fitaterana ny fitaterana làlana any Azia afovoany dia voalaza any amin'ireo firenena eny an-dalana.
C.Ny fitaterana làlana ara-làlana ao Azia afovoany dia azo ambara amin'ny seranana sisintany ho an'ny fahazoan-dàlana amin'ny fomba amam-panao na amin'ny toerana misy ny tetikasa.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena any Azia afovoany?
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Azia Afovoany?